Shina: Ny Sata faha 8, mba halàlaka sy tsy hanan-tahotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Desambra 2008 2:19 GMT
Ankatoky ny fankalazana ny faha enimpolo taonan'ny fanambarana eran-tany momba ny Zon'Olombelona ny 10 Desambra, Sinoa 303 mpitandro ny zon'Olombelona, no niaraka namoaka ny Sata faha 8, izay mitaky fanavaozana pôlitika any Shina. Kanefa, ny governemanta Sinoa dia nanapa-kevitra ny hankalaza ny fanambarana eran-tany ny zon'Olombelona amin'ny alalan'ny famoretana izany hetsika am-pilaminana izany. Manam-pahaizana , mpisolo vava mpandàla ny zon'Olombelona sy mpomba maromaro no nosamborina mba ho hadihadiana, iray amin'ireny i Liu Xiaobo izay mbola voatazon'ny mpitandro ny filaminana
Fanambaràn'ny mpanindrona ivoho?
Inona no antony hangejan'ny governemanta Sinoa io Sata io? Mazava ho azy fa tsy misy fanazavàna ofisialy afa-tsy ny filazàna fa mpanakorontana ny filaminana anatin”ny firenena i Liu Xiaobo. Angamba ho azontsika atao ihany ny mamaky ny fomba fihebitr'ireo mpomba ny governemanta mba hanomezan-danja ny tena fizotrany. Ho an'i Sima Nan dia nantsoiny hoe Fanambaràna revolisionera maro loko Sinoa io Sata io:
Ireo izay nanao sonia io “Fanambaràna revolisionera maro loko” io dia fatin-kisoa daholo.Tsy zoviana amin'ny sasany aminareo angamba ny anaran'i Mr. Perry Lin . Tamin'ny 1989, nanomana ny fitsoahan'ny olona iray izy. Nandritra ny fotoana maro, nanohana vondron'olona miombon-kevitra amin'izay nantsoina ho “hetsika demokratika” izy. Samy mahalala izy rehetra fa tsy avy amin'i Lin izy tenany irery fotsiny ireo volabe tsy hita noanoa. Misy mpanohana ao ambadika ao, mila olona fotsiny izy ireo mba hitantana ny resaka vola.
I Wu yu dia niantso ilay Sata faha 08 hoe Satan'ny Mpamadika:
Omaly, namaky tao amin'ny Sima Nan, ny dikanteny amin'ny teny Sinoa sy Anglisin'ilay Sata faha 08 aho. Ny lahatsoratra manontolo manindrahindra ny atao hoe soatoavina iraisan'ny rehetra, soloin'ny Etazonia tena, dia Satan'ny Mpamadika. Ny ideolojia sy ny kolontsaim-pirenena no tena tanjaky ny firenena. Vantany vao miventy ny ideolojian'i etazonia ity Sata ity, dia efa manindrahindra ny tanjak'i Etazonia izany, ary izay no maha-Satan'ny mpamadika azy .
Na dia mikendry ny hanampim-bava sy hamoritra ireo feo misandratra aza ny governemanta Sinoa, maro kosa ireo mpamaham-bolongana ao Shina no nisotro ny aleoko maty hanao sonia ilay Sata sy hanapariaka ny vaovao.
I Liberalist dia niady saina nandritry ny andro vitsy vao tapa-kevitra nony farany fa hametraka rango-pohy eo amin'ilay Sata amin'ny fampiasàna ny tena anarany:
Androany, nametraka rango-pohy ihany aho no niafarany, miaraka amin'ny tena anarako sy ny tena asako. Efa tara loatra angamba, nefa midika zava-dehibe ho ahy. Nisalasala be ihany aho teo aloha, indrindra koa amin'ny maha-mpiasa tena ahy, nefa manana ny olako manokana koa aho noho ny asako tsy maintsy anaovana filazàna isan-taona amin'ny governemanta. Raha mandray fanapahan-kevitra hanadihady ry zareo, dia zavatra bitika amin-dry zareo ny ‘manamboatra’ ahy.
Dia nijalijaly toy izay aho nandritry ny andro maromaro, nihorohoro am-pitoerana. Raha tena ekeko marina ny fandehan-draharaha, raha hanao ihany tokoa aho na tsia, mitombina tsara avokoa ireo antony rehetra. resaka fandraisana fanapahana no sisa. “Ho an'ny rariny sy hitsiny, ary na inona na ho inona ho vokany aoriana ao” no safidy hatao, fa mbola safidy iray hafa koa ny tsy hiala lavitra sy tsy hijàbaka, sarotra ny fandidiana. Ny zavatra aterany no manavaka azy ireo. Samy tompon'andraikitra amin'izay itondran'ny fony azy ny tsirairay avy, na lahy io na vavy. Ka ny hevitra tapako farany dia ity: raha tsy manao ity aho amin'ity indray mitoraka ity, dia mety ho neniko izany amin'ny hoavy.
I Ran yunfei, mpitoraka blaogy fanta-daza ary iray amin'ireo manampahaizana 303 niarananao sonia ilay Sata, dia miresaka momba ny fomba enti-manohitra ny tetika fampitahorana ao anatina firenena iray tsy refesi-mandidy:
Manontany ahy ny sasany, tsy matahotra ve ianao? Toy ny rehetra ihany anefa, matahotra aho. Na izany aza, ny fomba hitako hiatrehina ny tahotra dia mety ho hafa noho ny fahitan'ny sasany azy. Hoy ny sasany hoe, tsy maintsy misy mitsikilo ny resaka an-telefaonina ataonao. Hoy aho hoe, aleo handeha amin'izany (tsy midika ho fankasitrahako ny fihainoana resaka an-telefaonina izany an, toheriko izany, nefa ny fanoherako tsy hanova zavatra firy). Rehefa resaka mahakasika ny tombon-tsoam-bahoaka, izay lazaiko amin'ny takontakona dia tsy hifanalavitra amin'izay hambarako imasom-bahoaka. Hoy ny sasany, mety misy olona mitsongo dia ahy. Hoy aho, tsy dia mbola isan'izay mahasarika manokana aloha aho, na dia izay tokoa aza no zava-misy, tsy hatahotra ny hiara-hisotro dité amin'ilay olona aho, nefa tsy maintsy mandoa ny laniny izy. Raha manaiky hiaina anatin'ny vahohony ianao, dia ho faly tokoa aminao ny fanjakana. Zava-mahatretrika indrindra azy ny hahita anao miaina anaty fangovitana, anaty horohoro tsy manam-piadanana… Hajao ny fitsipika napetrakao sy ny tondro zotra nofaritanao, izany no kanonta lehibe hively ireo mpamafy tahotra.
Manazava ny antony nanaovany rango-pohy ilay Sata koa i Tie Liu , mpanoratra iray efa 76 taona :
Efa 76 taona aho, miaraka amin'ny solomasoko, naveriko novakiana efa ho in-telo misesy ilay Sata faha 08, avy eo aho tapa-kevitra hanao rango-pohy. Laharana faha 57 aho ao anatin'ny lisitra. Ao anatin'ilay Sata, dia voalaza fa : “… the Anti-Rightist Campaign (1957), ny Dingan-dava Lehibe (1958–1960), ny Revolisiona ara-kolontsaina (1966–1969), ny vonomokan'ny 4 Jona (Kianja Tiananmen) (1989), ary ny famoretana ireo antokom-pivavahana tsy nahazo alalana rehetra misy amin'izao fotoana sy ny fanafoanana ny hetsiky weiquan ho fitakian-jo. Nandritra ireo rehetra ireo, lehibe tokoa ny fahavoazana nozakain'ny vahoaka Sinoa. Ampolony tapitrisa maro no namoy ny ainy, ary solofo marobe taty aoriana no nahita ny fahalalahany, ny fiadanany, ary ny hasina maha-olona azy ireny nozimbazimbaina tsy nisy antra. ” Zava-marina raketin'ny tantara avokoa izany rehetra izany, vavolombelon'izany ny tenako, vavolombelon'ireny zava-doza rehetra ireny.
Fanoherana tao Hong Kong, tsy nisy mpitatitra
Na dia migoka ny fahalalahana miteny sy ny fanaovana gazety aza i Hong Kong, dia tsy nojeren'ny mpampahalala vaovao ny resaka Sata faha 08. Omaly, nanaraka ny hetsi-panoherana nitakiana ny hamotsorana an'i Liu Xiaobo aho, nefa tsy nahita mpampahalala vaovao avy eto Shina na iray aza, amin'io fotoana io koa anefa, tena voafetra be ny resaka mivantana iafanaovana amian'ny aterineto. Soratako ity tatitra avy amin'olon-tsotra iray ao amin'ny inmediahk.net momba ny fanoherana sy ny fepetra mifehy ny asa fampahalalam-baovao ity:
Ho an'ny ankamaroan'ireo mpampahalala vaovao online, dia ny tombontsoan'ny besinimaro no tena avoitran'izy ireny. Raha ny momba ny Sata faha 08 izao dia tafiditra ao anatin'ny resaka ny endrika malalaka ananan'ny forums sy ny blaogy. Na eo aza izany rehetra izany, ny olon-tokana na vondron'olom-bitsy tsy hahasehaka firy manoloana ny fironan'ny besinimaro… Raha ampitahaina amin'ireo mpiray kontinanta amintsika, ny mpitoraka balogy any Hong-Kong dia tsy manana tamba-jotra sy toe-tsaina mahaleotena fa zatra manaraka ny maro ary tsy mety lasa mafana fo amin'ny fampitana vaovao.
Ny fiparitahan'ny Sata faha 08 any Hong-Kong dia mariky ny fampitandremana. Ny governemanta dia nanao fanentanana momba ny fanabeazana mifototra amin'ny fitiavan-tanindrazana sy ny haino aman-jerintsika, indrindra fa ny televiziona, izay tsy miresaka afa-tsy ny momba ny Lalao Olaimpika, ny fandehanana any amin'ny habakabaka ary ny fandraisana fepetra nataon'ny governemanta manoloana ny olana ara-bola mba handrakotra ny ezaky ny mponina hoitondra fanovàna ny lafiny sosialy. Amin'ny lafiny iray hafa, ny mpampita vaovao online tsy miankina dia tsy afa-mitombo hery firy sy lasa fitaovana fampielezan-kevitra fotsiny. Ho lasa zaza tinaizan'ny fanjakana sisa ny taranatsika ho avy.
Mila mpampahalala vaovao tsy miankina matanjaka isika eto , izay misandrahaka kokoa sy tena mahaleo tena.
Hatramin'ny anio, Sinoa an'arivony no nanao sonia ilay Sata ary marobe ireo fitaovana (platerformes onlines) natao hanangonan-tsonia, isan'ireny ny: zola's google knol syinmediahk.net na ianao afaka mandefa hafatra amin'ny adiresy : 2008xianzhang@gmail.com na koa poonkarwai@gmail.com
Ny dika amin'ny teny Anglisin'ilay Sata dia hita ao amin'ny here, ny amin'ny teny Japoney kosa here, ary ny teny Sinoa ato.